Home Wararka RW Kheyre oo ku bahdilay Muqadisho Ugaaska iyo odoyaasha dhaqanka ee Beesha...
RW Kheyre oo ku bahdilay Muqadisho Ugaaska iyo odoyaasha dhaqanka ee Beesha Mariixaan?
Madaxweyne Farmaajo aya inta uusan u bixin safarka dheer ee uu ku marayo qaybo ka mida dunida aya waxa uu magaalada Muqadishu ku martiqaaday Ugaaska Beesha Mariixaan iyo odayaasha dhaqanka. Safarka odoyaasha dhaqanka ee beesha Mariixaan aya la xiriirtay wadatashi uu Madaxweynaha ugu yeeray in ay ku yimadaan magaalada Muqadishu.
MW Farmaajo oo inta uusan bixin kala balamay Kheyre soo dhaweynta iyo qaabilaada odoyaasha dhaqanka ayaa ka biyo diiday qaabilaadooda iyo soo dhaweyntoodaba. Waxa uu sheegay in uusan wax war u haynin imaatinkooda iyo ujeedada ay u yimaadeenba.
Odoyaasha ayaa waxa ay dageen hoteelo uu ku jiro hotelka Sayidka iyaga oo eheldooda lacag soo waydiistay. Maxamed Khaliil oo odayaasha Hogaaminayay aya yiri waa nasiib xumo in RW Kheyre uu la dagaalo beesha Mariixaan. Waxa uu yiri ”RW Kheyre balan ayuu Farmaajo hortiisa ku qaaday markii uu baxayna albaabada ayuu naga xirtay.
RW Kheyre aya waxaa ku jira dareen ah in safarka odoayaasha dhaqanka uu la xiriiro wadatashi ku saabsan xaalada dalka maraaayo iyo joogitaankiisa ama bixtaanka RW Kheyre. Odoyaasha beesh Mariixaan ayaa hadda ku ildaran magalaada Muqdishu iyaga ioo sugaaya imaatinka MW Farmaajo.
Previous articleMW Farmaajo oo qandaraaska dhismaha Villa Soomaaliya siiyay Cali Geedi iyo Cabdi Jiinoow? Muxuu ku badashay?
Next articleGuddoomiye Ku xigeenka Baarlamaanka oo soo saaray warqad maxkamadeed kuna eedeeynayo MOL (Akhriso)
Beesha Caalamka oo markii u horeeysay soo dhaweysay fakarka dhismaha dowlad...
MW Uhuru oo sheegay in Bariga Afrika ay ka jirto amni...